मैले गाएको गीत उनले दिनमा दश पटक सुनेको देख्दा म पटक पटक खुशीले रोएको छु : गायक श्रेष्ठ « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
मैले गाएको गीत उनले दिनमा दश पटक सुनेको देख्दा म पटक पटक खुशीले रोएको छु : गायक श्रेष्ठ
काठमाडौँ । गायक तथा संगीतकार नागेन्द्र श्रेष्ठको हालै सार्वजनिक गीत सावन होइनन् मेरा नजर यतिबेला चर्चामा छ । ५२ वर्षको उमेरमा पनि सांगीतिक बजारमा निकै नै सक्रिय गायक श्रेष्ठ गायनकै सिलसिलामा वर्षमा ६ महिनाभन्दा बढी समय विदेशमा नै बिताउँदा बिताउँदै पनि उनको स्वरमा सजिएको यो गीतले यतिबेला बजारमा राम्रो चर्चा पाइरहेको छ । सुन्दरी नायिका रिमा विश्वकर्मा र रञ्जन रिजालले जीवन्त अभिनय गरेको यो गीतमा चर्चित गीतकार अरुण तिवारीका शब्द सृजना र टिका भण्डारीको संगीतमा गायक नागेन्द्र श्रेष्ठ बगेका छन् ।
अरुण तिवारीले झण्डै २० वर्ष अगाडी शृजना गरेको यो गीत गायक श्रेष्ठले टिका भण्डारीकै संगीतमा २० वर्ष अगाडी नै रेकर्ड गराए पनि यो गीतलाई पुन नयाँ साजसज्जा सहित बजारमा ल्याइएको हो । करिब २४ वर्ष अगाडी रेडियो नेपालमा चाँदनीमा बग्छ खोलो, टाढा धेरै टाढा बोलको गीतबाट स्वर परिक्षा पास गरेर उनी गायनमा प्रवेश गरेका हुन् ।
गायनमा प्रवेश गरेको २४ वर्ष बितिसक्दा गायक श्रेष्ठले सावन होइनन् मेरा नजर गाउँदा र विभिन्न समयमा यो गीतका शब्दको वहाबमा डुब्दै पटक पटक रोएको बताउँछन् । उनी रुनुको कारण थियो गीतकार तिवारीले गायक श्रेष्ठकै जीवनमा मिल्दोजुल्दो गीतको अन्तरा मुस्कान पनि लाग्छ मलाई बिझाउने काँडा जस्तै, सायद त्यो त म खसेको सौन्दर्यको डाँडा जस्तै आफ्नो जीवनसँग पनि मेल खाएको उनको तर्क छ ।
गीतका शब्द र संगीत सुन्दा नै उनले गीतमा आफ्नो जीवन भेटे र तत्कालै रेकर्ड गर्ने कुरा भयो । सोही गीतका गायक श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी जस्ताको त्यस्तै :
कसरी लाग्नु भयो सांगीतिक क्षेत्रमा ?
बाल्यअवस्थादेखि नै गीत संगीत मेरो रुची र सोख थियो । मेरी आमाले पनि गाउनुहुन्थ्यो । बुबाले पनि गीत सुन्न खुबै रुचाउनुहुन्थ्यो । सायद आमाको संस्कार र मेरो रुचिमा मेल खाएर हुनुपर्छ म अहिले गायनको क्षेत्रमा छु ।
संगीतमा लाग्दा लाग्दै तपाईले आफ्नो प्रेम पाउनुभयो ? तपाईले आफ्नी प्रेमीकालाई गायनका माध्यमबाट के उपहार दिनुभयो ?
हालै सार्वजनिक मेरो गीत सावन होइनन् मेरा नजर मैले मेरी प्रेमीका , मेरी श्रीमतीका लागी सर्मपित गरेको छु । अहिले पनि उनले यो गीत दिनमा दश पटक गाउँदै सुन्दै गरेको देख्दा म पनि पटक पटक खुशीले रोएको छु । पग्लीएको हुन्छु ।
गीतको सार के हो ?
यो गीतले यौटा पुरुष जसले जिन्दगीमा अरु सबै थोक पायो…पाएन त केवल माया…गीतको सार यही हो।
२० वर्ष अगाडी रेकर्ड भएको यो गीतमा त्यतिबेला र अहिले के फरक छ रर्केडिगंका हिसाबले ?
त्यतिबेला साजबाज सहित रेर्कड गरिएको यो गीत अहिले आएर पछिल्लो माहोललाई हेरेर नयाँ फ्युजनका साथ रेर्कड गरिएको हो । गीतमको मर्म र भाव उही हो । अहिले भिज्यिुअलको जमाना छ । सबैकुरा दृश्यले पनि बोलीरहेको छ ।
मेरो विचारमा संगीत बाँच्ने आधार हो । यसलाई बुझ्न सक्ने हो भने जीन्दगी जिउनलाई सजिलो हुन्छ । संगीतलाई मानिसले मात्रै होइन जीव जन्तुले पनि सुनेर रमाउँछन् । त्यसैले संगीत भनेको मेरा लागी जिन्दगी हो ।
संगीतमा लागेर के पाउनु भो अनि के गुमाउनु भो ?
संगीतमा लागेर मैले इज्जत, प्रतिष्ठा कमाएको छु । यो क्षेत्रमा पैसा त मनग्य छैन । तर पनि मानिसहरुले चिन्नुहुन्छ । यो नयाँ गाीत हेरेर विश्वभरका नेपालीले राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । हामी कलाकारहरुलाई थोरै पैसा धेरै माया चाहिन्छ ।
संगीतमा लागेर बाँच्न सकिन अवस्था छ त ?
पहिला त त्यस्तो थिएन तर अहिले आएर त्यो माहोल बन्दैछ । राम्रो पौसा कमाइरहेका छन् गायक गायिकाहरु । घर गाडी बंगला जोड्न सकिने अवस्था छ । तर सबै गायक गायिकामा यो कुरा लागू नहुन सक्छ । तर सबैले पैसाका लागी मात्रै यो क्षेत्रमा आएको हुँदैनन् । कसैको सोख हुन्छ संगीत । कसैको रुची त कसैको पेसा । आफ्नो पेसामा इमान्दार हुने हो भने यो जति रमाइलो, नाम र दाम कमाउन सकिने दुनियामा अर्को काम छैन । वश एक पटक भाग्यले पनि दिर्नपर्छ साथ ।
सांगीतिक क्षेत्रमा भोलीका दिनमा यहाँ कसरी अगाडी बढ्दै हुनुहुन्छ ?
भोलीका दिनमा अझ अझ रचनात्मक तरिकले अगाडी बढ्दै छु । मेरा नयाँ गीतहरु आउँदैछन् । अझ यो गीतलाई दर्शकमाझ पुर्याउनुछ । किनकी यो गीतमा साँच्चिकै जीवन छ ।